Cultural | Myanma Radio and Television
ဘဝနှင့်အနုပညာ "မြန်မာသံစဉ် သီဆိုရှင် ပီပြင်ချိုမြ တေးသွားအလှ (ရွှ...
Cultural May 16, 2022
ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း" (အပိုင်း-၁၈)...
Cultural May 15, 2022
ခေတ်အလိုက်ကြေးမုံပြင် “ကျောက်ခေတ်၊ ကြေးခေတ်၊ သံ‌ခေတ်ပြခန်း”(အမျိုးသားပ...
Cultural May 07, 2022
ဒေသတစ်ခု ထုတ်ကုန်တစ်မျိုး "အံ့မခန်းဖွယ်ရာ ပန်းတည်းပညာ"
Cultural May 03, 2022
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဓမ္မာစာ...
Cultural April 29, 2022
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဓမ္မာစာရ (အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ) ဒက္ခိဏာရာမအလယ်ကျောင်း၊ ကောလင်းမြို့၊...
ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲက စစ်ကိုင်း -အပိုင်း ၁၄(တောင်ဖီ...
Cultural April 25, 2022
Cultural April 21, 2022
ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲက စစ်ကိုင်း -အပိုင်း ၁၃(ရန်အောင်မြင်ရှင်ပင်နံကိုင်းဘုရားနှင့်...
Cultural April 18, 2022
ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း - အပိုင်း ၁၂ ( ရတနာစေတီဆင်များရှင်ဘုရားနှင့် မရှိခ...
Cultural April 11, 2022
ပုပ္ပါးမြေ၏ အေးရိပ်ဆာယာ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ စွယ်တော်ဓမ္မရိပ်သာ
Cultural March 31, 2022
ရာဇဝင်ထဲကသမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း (ရာဇမဏိစူဠာကောင်းမှုတော်စေတီတော်ကြီးသမိုင်း)- အပိုင...
Cultural March 28, 2022
ရာဇဝင်ထဲကသမိုင်းအနုပညာ “သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း” (အပိုင်း-၁၀) (အရိယာဝံသချောင်နှင့် ရုပ်စုံကျောင်းသမိုင်...
Cultural March 21, 2022
Cultural March 19, 2022
ရာဇဝင်ထဲကသမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း" (အပိုင်း-၉) (ရတနာပုံခေတ်၏သမိုင်းမှတ်တိုင် စစ...
Cultural March 14, 2022
ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း" (အပိုင်း-၇) (တိလောကဂုရုလိုဏ်ဂူနှင့် လောကမှန...
ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း" (အပိုင်း-၆) (သမိုင်းအလှတို့စုဝေးရာ စစ်ကိုင်...
Cultural February 21, 2022
မြန်မာ့ရှေးဟောင်း ပေ၊ပုရပိုက်အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ
Cultural February 18, 2022
မြန်မာ့ကျက်သရေ တက်နေဂုဏ်ရည် (ယွန်းထည်)
Cultural February 17, 2022
တိုင်းရင်းသားတို့လူမှုဝန်းကျင်မျိုးစုံလင် အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်ဥယျာဉ် (နေပြည်တော်) (ကယားတိုင်းရင်းသာ...
Cultural February 05, 2022
ခေတ်အလိုက်ကြေးမုံပြင် "မြန်မာ့ပန်းချီပြခန်း" (အပိုင်း-၂)